बाटोमा भेटाएको पैसा टिप्नु शुभ की अशुभ ? मिल्छ यस्तो संकेत – Sandesh Press
August 20, 2021 641
काठमाडौँ । कयौँपल्ट बाटोमा हिँड्दा हामीहरुले बाटोमा रुपैँया वा सिक्का भेट्टाउने गछौँ । कसैले भेटिएको पैसा आफैँसँग राख्छन् त कसैले दान गर्छन्।
Prevयी ३ राशिको लागि अशुभः मानिन्छ सुन !
Nextजन्मेको बार अनुसार महिला र पुरुषको भाग्य-स्वभाव कस्तो हुन्छ ? हेर्नुहोस् !
युक्रेनमा 180 जनाको मृत्यु दायाँ हुनेले मात्रा Rip Rip लेख्नुहोस
गर्भवती भारतीलाई श्रीमानको यस्तो कुराले दुखी बनायो, रुँदै बनाइन् भिडियो